Itoobiya & Soomaalida Xilalka ay ka heshay Xukuumadda uu soo dhisay Abiy Axmed!! (Sawirro) – Radio Daljir
Itoobiya & Soomaalida Xilalka ay ka heshay Xukuumadda uu soo dhisay Abiy Axmed!! (Sawirro)
Oktoobar 9, 2021 11:35 b 0
Xukuumaduu uu soo dhisay Abiy Axmed ayaa waxaa ku jiray shan xubnood oo ka koobnaa Wasiir iyo Wasiir kuxigeeno.
Xubnaha Wasiirada ee matalaya DDS waxa ay kala ahaayeen:
1. Mudane Aadan Faarax (Wasiir – Madaxa Xarunta Dhexe ee Xisbiga dalka u taliya)
2. Mudane Axmed Shide (Wasiir- Maaliyadda)
3. Mudane Prof. Abdiwasa A. Bade (Wasiir – Xarunta Dhexe ee Xisbiga)
4. Marwo Saxarla Cabdullahi (Wasiir ku xigeen- Caafimaadka)
5. Mudane Dr. Eng Suldaan Wali (Wasiir ku xigeen – Biyaha)
6. Mudane Xassan Macallin (Wasiir ku xigeen – Ganacsiga iyo Xidhiidhka Geeska)
Madaxweynaha DDS Musafe Muxumed Cumar ayaa hambalyo iyo bogaadiba u diray Wasiirada iyo Wasiir Ku Xigeenada lamagacaabay ee ka soo jeeda Deegaanka Soomaalida. Wuxuuna sheegay in uu u rajaynaynaa in ka qayb-galka siyaasadu ayna ku ekaan oo kaliya wasiiro, balse hay’adaha dawliga ah ee kale sida Wakaaladaha iyo Diblamaasiyiintana door fiican aan ku yeelan doono. Ma dhamaystirna waase biloow wanaagsan.
Dowladda Deegaanka Soomaalida 329 Wararka 26416
Turkiga oo Maraykanka ka dalbaday Diyaarado dagaal oo ah nooca loo yaqaan F-16